Tsy Mivadika sy be Hatsaram-panahy Feno Fitiavana i Jehovah | Manatòna
1, 2. Nahoana no azo lazaina fa nahafantatra tsara ny atao hoe mivadika i Davida Mpanjaka?
NAHAFANTATRA tsara ny atao hoe mivadika i Davida Mpanjaka. Nanao teti-dratsy ny mpiray tanindrazana taminy mba hanonganana ny fanjakany, izay efa nikorontana. Namadika azy koa ny sasany tamin’ireo namany akaiky. Anisan’izany i Mikala, vadiny voalohany. “Tia an’i Davida” izy tamin’ny voalohany, ary azo inoana fa nanohana azy teo amin’ny fanjakany. Nanjary nanamavo an’i Davida “tao am-pony” anefa izy, ka nihevitra azy ho “tahaka ny adala” mihitsy.—1 Samoela 18:20; 2 Samoela 6:16, 20.
2 Teo koa i Ahitofela, mpanolo-tsaina manokan’i Davida. Noheverina ho tenin’i Jehovah mihitsy ny toroheviny. (2 Samoela 16:23) Namadika azy anefa io namany nitokisany io, ka niaraka tamin’ireo mpikomy. Ary iza no nitarika an’ireo mpanongam-panjakana? I Absaloma, zanak’i Davida! ‘Nametsy ny fon’ny lehilahy tamin’ny Isiraely’ hatrany io mpanararaotra io, ka nanandra-tena ho mpanjaka koa. Be ireo mpanaraka an’i Absaloma tamin’ny fikomiana, ka voatery nandositra mba hanavotana ny ainy i Davida Mpanjaka.—2 Samoela 15:1-6, 12-17.
3. Inona no natokisan’i Davida?
3 Nisy tsy nivadika tamin’i Davida ve? Fantany fa nisy izany, nandritra ny fahoriany rehetra. Iza? I Jehovah Andriamanitra. Hoy i Davida momba an’i Jehovah: “Ny olona tsara [“tsy mivadika”, NW] no isehoanao fa tsara [“tsy mivadika”, NW].” (2 Samoela 22:26) Inona no atao hoe tsy mivadika, ary nahoana i Jehovah no lazaina fa ohatra tsara indrindra amin’izany?
Inona no atao hoe tsy mivadika?
4, 5. a) Inona no atao hoe tsy mivadika? b) Nahoana no samy hafa ny zavatra azo ianteherana sy ny olona tsy mivadika?
4 Ny hoe “tsy mivadika”, araka ny Soratra Hebreo, dia midika hoe tsara fanahy sy tia ary mifikitra amin-javatra iray, ka tsy mamela azy io raha tsy tanteraka ny zavatra nikasana azy. Be fitiavana ny olona tsy mivadika. Nolazain’ny mpanao salamo fa “vavolombelona marina” ny volana, satria miseho foana isan’alina. (Salamo 89:37) Azo itokisana sy ianteherana izy io, araka izany. Tsy azo lazaina ho tsy mivadika toy ny olona anefa ny volana. Nahoana? Satria porofon’ny fitiavana ny tsy fivadihana, nefa tsy afaka maneho izany ny zavatra tsy manana aina.
Antsoina hoe vavolombelona marina ny volana, nefa ny zavaboary manan-tsaina ihany no afaka tsy mivadika toa an’i Jehovah
5 Porofon’ny fitiavana ny tsy fivadihana, ao amin’ny Baiboly. Ny fisehoan’izy io fotsiny dia efa milaza fa mifandray ilay olona tsy mivadika sy ilay tsy ivadihana. Zavatra mitohy io tsy fivadihana io. Tsy toy ny onjan-dranomasina miova arakaraka ny rivotra izy io. Sady maharitra no matanjaka kosa ny tsy fivadihana, na fitiavana tsy mivadika, ka afaka mandresy ny sakana mahery indrindra.
6. a) Maro ve ny olona tsy mivadika, ary ahoana no ampisehoan’ny Baiboly izany? b) Inona no fomba tsara indrindra hianarana momba ny tsy fivadihana, ary nahoana?
6 Vitsy ny olona tsy mivadika ankehitriny. Matetika ny namana no mampitondra ‘fahoriana.’ Rentsika matetika fa misy olona mandao ny vadiny. (Ohabolana 18:24; Malakia 2:14-16) Maro no mamitaka, hany ka milaza toa an’i Mika mpaminany isika hoe: “Lany tsy misy amin’ny tany intsony ny tsara fanahy [“ny tsy mivadika”, NW].” (Mika 7:2) Matetika no tsy maneho hatsaram-panahy miharo fitiavana ny olona, fa mampiavaka an’i Jehovah kosa ny tsy fivadihana. Ny fandinihana ny tsy fivadihan’i Jehovah tokoa no fomba tsara indrindra hianarana momba an’io lafin’ny fitiavany io.
Tsy misy tsy mivadika toa an’i Jehovah
7, 8. Nahoana no azo lazaina fa i Jehovah ihany no tsy mivadika?
7 Hoy ny Baiboly momba an’i Jehovah: ‘Ianao ihany no masina [“tsy mivadika”, NW].’ (Apokalypsy 15:4) Nahoana no i Jehovah ihany no antsoina hoe tsy mivadika? Tsy nisongadina koa ve indraindray ny tsy fivadihan’ny olona sy ny anjely? (Joba 1:1; Apokalypsy 4:8) Ary i Jesosy Kristy? Tsy izy ve no voalohany amin’ireo “tsy mivadika”? (Salamo 16:10, NW) Nahoana àry no lazaina fa i Jehovah ihany no tsy mivadika?
8 Tadidio aloha fa lafiny iray amin’ny fitiavana ny tsy fivadihana. “Andriamanitra dia fitiavana”, satria izy mihitsy no fisehoana velon’ny fitiavana. Iza àry no afaka ny tsy hivadika amin’ny fomba feno noho i Jehovah? (1 Jaona 4:8) Afaka mampiseho ny toetran’Andriamanitra ny anjely sy ny olona, nefa i Jehovah ihany no tsy mivadika amin’ny fomba feno indrindra. “Fahagola” izy, ka efa naneho hatsaram-panahy miharo fitiavana naharitra kokoa noho ny zavaboary hafa rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. (Daniela 7:9) I Jehovah mihitsy àry no tena fisehoan’ny tsy fivadihana. Tsy misy zavaboary afaka maneho io toetra io tsara kokoa noho izy. Indro misy ohatra vitsivitsy.
9. Nahoana no lazaina hoe tsy mivadika amin’ny asany rehetra i Jehovah?
9 “Mamindra fo [“tsy mivadika”, NW] amin’ny asany rehetra” i Jehovah. (Salamo 145:17) Ahoana izany? Mamaly izany ny Salamo 136. Misy famonjena maro nataon’i Jehovah voatonona ao, ary anisan’izany ilay fanafahana mahagaga ny Isiraelita teo amin’ny Ranomasina Mena. Mirakitra an’ireto teny ireto ny andininy tsirairay amin’io salamo io: “Fa mandrakizay ny famindrampony [“ny tsy fivadihany”, NW].” Anisan’ny fanontaniana hosaintsainina, eo amin’ny pejy 289 io salamo io. Ho hitanao eo am-pamakiana azy io fa mahagaga ireo fomba maro nanehoan’i Jehovah hatsaram-panahy miharo fitiavana tamin’ny vahoakany. Tsy mivadika amin’ny mpanompony mahatoky i Jehovah, ka mihaino ny fitarainan’izy ireo, sy manao zavatra amin’ny fotoana mety. (Salamo 34:6) Tsy miova mihitsy ny fitiavan’i Jehovah ny mpanompony, raha mbola tsy mivadika aminy koa izy ireo.
10. Ahoana no ampisehoan’i Jehovah fa tsy mivadika amin’ny fitsipiny izy?
10 Mampiseho ny tsy fivadihan’i Jehovah amin’ny mpanompony koa ny fanarahany hatrany ny fitsipiny. Tsy toy ny olombelona mpanota entanin’ny fihetseham-po i Jehovah, fa tsy miovaova ny fiheverany ny tsara sy ny ratsy. Tsy niova nandritra ny an’arivo taona ny fiheverany ny fifandraisana amin’ny fanahy ratsy sy ny fanompoan-tsampy ary ny famonoana olona. Hoy izy tamin’ny alalan’i Isaia mpaminany: “Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho.” (Isaia 46:4) Afaka matoky àry isika fa handray soa, raha manaraka ireo toromarika ara-pitondran-tena ao amin’ny Tenin’Andriamanitra.—Isaia 48:17-19.
11. Milazà ohatra mampiseho hoe manatanteraka ny fampanantenany foana i Jehovah.
11 Fomba isehoan’ny tsy fivadihan’i Jehovah koa ny fanatanterahany ny fampanantenany. Tanteraka ny zavatra lazainy mialoha. Hoy i Jehovah: “Ny teniko izay aloaky ny vavako: Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy.” (Isaia 55:11) Porofon’ny tsy fivadihan’i Jehovah amin’ny vahoakany ny fanatanterahany ny teniny. Tsy avelany hitaintaina izy ireo hiandry zavatra tsy eritreretiny hatao. Tsy misy azo kianina mihitsy i Jehovah amin’io lafiny io, ka afaka niteny toy izao i Josoa mpanompony: “Tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain’i Jehovah tamin’ny taranak’Isiraely; fa tanteraka avokoa izany rehetra izany.” (Josoa 21:45) Tsy ho diso fanantenana mihitsy àry isika, satria hanatanteraka ny fampanantenany foana i Jehovah.—Isaia 49:23; Romana 5:5.
12, 13. Nahoana no lazaina hoe “mandrakizay” ny hatsaram-panahin’i Jehovah miharo fitiavana?
12 Efa noresahintsika teo fa “mandrakizay” ny hatsaram-panahin’i Jehovah miharo fitiavana. (Salamo 136:1) Nahoana no milaza izany isika? Satria aloha, maharitra ny famelan-kelok’i Jehovah. Noresahintsika tao amin’ny Toko 26 fa tsy mampahatsiahy ny fahotan’ny olona navelany heloka i Jehovah. Tokony hankasitrahantsika ny hoe mandrakizay ny hatsaram-panahin’i Jehovah miharo fitiavana, satria “samy efa nanota” isika rehetra, “ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra.”—Romana 3:23.
13 Misy dikany hafa koa anefa ilay hoe “mandrakizay” ny hatsaram-panahin’i Jehovah miharo fitiavana. Milaza ny Teniny fa ho “tahaka ny hazo ambolena eo amoron’ny rano velona [ny olo-marina], izay mamoa amin’ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo; ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa.” (Salamo 1:3) Eritrereto ny hazo tsara manana ravina tsy mety malazo mihitsy! Ho lava sy hiadana ary hamokatra toy izany koa ny fiainantsika, raha tena tia ny Tenin’Andriamanitra isika. Mandrakizay ny fitahiana arotsak’i Jehovah amin’ny mpanompony mahatoky. Hahita mandrakizay ny hatsaram-panahiny miharo fitiavana tokoa ny olona mankatò, ao amin’ny tontolo vaovao sy marina hoentin’i Jehovah.—Apokalypsy 21:3, 4.
‘Tsy hahafoy an’ireo tsy mivadika’ aminy i Jehovah
14. Ahoana no ankasitrahan’i Jehovah ny tsy fivadihan’ny mpanompony?
14 Efa nasehon’i Jehovah foana fa tsy mivadika izy. Tsy miova mihitsy izy, ka tsy hivadika amin’ny mpanompony mahatoky mihitsy. Hoy ny mpanao salamo: “Efa mba tanora ihany aho, ary efa antitra ankehitriny; fa tsy mbola hitako izay marina nafoy, na ny zanany mangataka hanina. Fa Jehovah tia rariny sady tsy hahafoy ny olony masina [“tsy mivadika”, NW].” (Salamo 37:25, 28) Marina fa mendrika ny ivavahantsika i Jehovah, satria izy no Mpamorona. (Apokalypsy 4:11) Sarobidy aminy koa anefa ny fahatokiantsika, satria tsy mivadika izy.—Malakia 3:16, 17.
15. Hazavao fa manasongadina ny tsy fivadihan’i Jehovah ny fomba nitondrany ny Isiraely.
15 Mamindra fo i Jehovah ka manampy foana ny vahoakany, rehefa azom-pahoriana izy ireo. Hoy ny mpanao salamo: “Miaro ny fanahin’ny olony masina [“tsy mivadika”, NW] Izy ary mamonjy azy amin’ny tànan’ny ratsy fanahy.” (Salamo 97:10) Eritrereto ny fomba nitondrany ny Isiraelita. Nafahana tamin’ny fomba mahagaga teo amin’ny Ranomasina Mena izy ireo, ka nihira toy izao ho an’i Jehovah: “Tarihinao amin’ny famindramponao [na fitiavanao tsy mivadika] ny firenena izay navotanao.” (Eksodosy 15:13) Tena porofon’ny tsy fivadihan’i Jehovah io fanafahana teo amin’ny Ranomasina Mena io. Hoy àry i Mosesy tamin’ny Isiraelita: “Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra anefa no niraiketan’ny fitiavan’i Jehovah taminareo sy nifidianany anareo, fa hianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza; fa ny nitiavan’i Jehovah anareo sy ny nitandremany ny fianianana izay efa nianianany tamin’ny razanareo no nitondran’i Jehovah anareo tamin’ny tànana mahery sy nanavotany anao tamin’ny trano nahandevozana, dia tamin’ny tànan’i Farao, mpanjakan’i Egypta.”—Deoteronomia 7:7, 8.
16, 17. a) Ahoana no nanehoan’ny Isiraelita fa tsy nahay nankasitraka izy ireo, nefa ahoana no nangorahan’i Jehovah azy ireo? b) Ahoana no nanehoan’ny ankamaroan’ny Isiraelita fa “tsy nisy nahavonjy azy” intsony? Inona no fampitandremana azontsika avy amin’izany?
16 Tsy nankasitraka ny famindram-pon’i Jehovah anefa ilay firenen’ny Isiraely, satria “mbola nandroso nanota taminy ihany izy ireo ka nampahatezitra ny Avo Indrindra”, taorian’ilay fanafahana. (Salamo 78:17) Nikomy foana izy ireo nandritra ny taonjato maro, niala tamin’i Jehovah sy lasa nanaraka andriamani-diso sy fomban’ny mpanompo sampy. Fahalotoana no mba hany vokatr’izany. Tsy nanafoana ny fanekeny anefa i Jehovah. Nilaza tamin’ny alalan’i Jeremia mpaminany aza izy, ka niangavy hoe: “Miverena hianao, ry Isiraely mpiodina, ... tsy hampanjombona ny tavako aminareo Aho; fa mamindra fo [“tsy mivadika”, NW] Aho.” (Jeremia 3:12) Hitantsika tao amin’ny Toko 25 anefa fa tsy vonona hiova ny ankamaroan’ny Isiraelita. Tena “nihomehy ireny irak’Andriamanitra ireny [izy ireo] sady nanazimba ny teniny sy namazivazy ny mpaminaniny.” Inona no vokany? ‘Nihatra taminy ny fahatezeran’i Jehovah, ka tsy nisy nahavonjy azy.’—2 Tantara 36:15, 16.
17 Inona no ianarantsika avy amin’izany? Sady tsy jamba no tsy minomino foana ny tsy fivadihan’i Jehovah. Marina fa ‘be famindram-po’ i Jehovah, ary faly mamindra fo izy rehefa misy antony anaovana izany. Inona anefa no mitranga rehefa mafy loha sy tsy mety miova ilay nanao ratsy? Manaraka ny fitsipiny marina hatrany i Jehovah amin’izay, ka manameloka an’ilay olona. Nolazaina tamin’i Mosesy tokoa fa “tsy mety manamarina ny meloka” i Jehovah.—Eksodosy 34:6, 7.
18, 19. a) Nahoana no efa porofon’ny tsy fivadihan’i Jehovah ny fanasaziany ny ratsy fanahy? b) Ahoana no hampisehoan’i Jehovah fa tsy mivadika amin’ireo mpanompony maty noho ny fanenjehana izy?
18 Efa porofon’ny tsy fivadihan’i Jehovah ny fanasaziany ny ratsy fanahy. Ahoana izany? Mamaly izany ny bokin’ny Apokalypsy, izay misy ireo baiko omen’i Jehovah an’ireo anjely fito: “Mandehana, aidino amin’ny tany ny ao amin’ny lovia fito feno ny fahatezeran’Andriamanitra.” Nivadika ho ra “ny ony sy ny loharano” rehefa nandrarahan’ilay anjely fahatelo ny loviany. Hoy ilay anjely tamin’i Jehovah: “Marina Hianao, Ilay ankehitriny sy taloha, dia ny Iray Masina [“Ilay Tsy Mivadika”, NW], satria efa nitsara toy izany Hianao; fa ny ran’ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia ra kosa no nomenao hosotroiny; ary tandrifiny ho azy izany.”—Apokalypsy 16:1-6.
Tsy mivadika i Jehovah ka hahatsiaro sy hanangana an’ireo tsy nivadika hatramin’ny fahafatesana
19 Mariho fa nantsoin’ilay anjely hoe “Ilay Tsy Mivadika” i Jehovah, tamin’io didim-pitsarana io. Nahoana? Satria mampiseho ny tsy fivadihany amin’ny mpanompony i Jehovah, rehefa mandringana ny ratsy fanahy. Maro tamin’ireo mpanompony tokoa no maty noho ny fanenjehana. Tadidin’i Jehovah tsara izy ireny. Tsy andriny izay hahitana azy ireny indray, ary hamafisin’ny Baiboly fa hamaly soa azy ireny amin’ny alalan’ny fananganana amin’ny maty izy. (Joba 14:14, 15) Tsy hadinon’i Jehovah ny mpanompony tsy mivadika, na dia efa maty aza. ‘Velona avokoa izy rehetra’, aminy. (Lioka 20:37, 38) Hatsangan’i Jehovah amin’ny maty ireo olona tsaroany, ka manaporofo izany fa tsy mivadika izy.
Novonoin’ny Nazia i Bernard Luimes (ambony) sy Wolfgang Kusserow (afovoany)
Nolefonin’ny antoko politika iray i Moses Nyamussua, ka maty
Ahazoana famonjena ny fitiavana tsy mivadik’i Jehovah
20. Iza ireo ‘fanaky ny famindram-po’, ary ahoana no nampisehoan’i Jehovah ny tsy fivadihany tamin’izy ireo?
20 Tena tsy nivadika tamin’ny mpanompony mahatoky i Jehovah hatramin’izay. Efa an’arivo taona izy no “be fahari-po ka nandefitra tamin’izay fanaky ny fahatezerana voavoatra hosimbana.” Nahoana? “Mba hampahafantarina koa ny haren’ny voninahiny amin’izay fanaky ny famindrampo, izay namboariny rahateo hahazo voninahitra.” (Romana 9:22, 23) Ny ‘fanaky ny famindram-po’ dia ireo olona tso-po voahosotry ny fanahy masina mba ho mpiara-mandova amin’i Kristy any amin’ny Fanjakany. (Matio 19:28) Nanao izay hahavoavonjy azy ireo i Jehovah, ka nampiseho fa tsy nivadika tamin’i Abrahama, izay nanaovany izao fanekena izao: “Amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany,—satria nanaiky ny teniko hianao.”—Genesisy 22:18.
Tsy mivadika i Jehovah, ka azo antoka ny fanantenan’ireo mpanompony mahatoky
21. a) Ahoana no ampisehoan’i Jehovah ny tsy fivadihany amin’ny “olona betsaka”, izay manantena tsy ho faty amin’ny “fahoriana lehibe”? b) Inona no irinao hatao, noho ny tsy fivadihan’i Jehovah?
21 Tsy mivadika amin’ny “olona betsaka” koa i Jehovah. Manantena ny tsy ho faty amin’ny “fahoriana lehibe” sy hiaina mandrakizay ao amin’ny paradisa eto an-tany izy ireo. (Apokalypsy 7:9, 10, 14) Omen’i Jehovah fahafahana hiaina mandrakizay ny mpanompony, na dia tsy lavorary aza. Ahoana no anaovany izany? Amin’ny alalan’ny avotra, dia ilay porofon’ny tsy fivadihany lehibe indrindra. (Jaona 3:16; Romana 5:8) Misarika an’ireo tia ny fahamarinana ny tsy fivadihan’i Jehovah. (Jeremia 31:3) Tsy mahatsiaro ho akaiky kokoa an’i Jehovah ve ianao, noho ny tsy fivadihany hatramin’izay sy amin’ny hoavy? Faniriantsika ny hanatona an’Andriamanitra, ka enga anie isika hampitombo ny fahatapahan-kevitsika tsy hivadika aminy, ho setrin’ny fitiavany antsika.
1 Samoela 24:2-23 Ahoana no nampisehoan’i Davida tamin’ny fitondrany an’i Saoly Mpanjaka, fa nampiseho ilay tsy fivadihana ankasitrahan’i Jehovah izy?
Estera 3:7-9; 4:6-14 Ahoana no nampisehoan’i Estera fa tsy nivadika tamin’ny vahoakany izy, na dia nety ho nahafaty azy aza izany?
Salamo 136:1-26 Inona no ampianarin’io salamo io antsika momba ny famindram-po, na fitiavana tsy mivadik’i Jehovah?
Obadia 1-4, 10-16 Tsy nivadika tamin’ny vahoakany i Jehovah, ka ahoana no namaizany ny Edomita, noho ny fivadihan’izy ireo?
Inona no atao hoe mora hatonina sy tsy manavakavaka? Handinika an’ireo toetran’i Jehovah ireo isika ato, mba hahafahantsika manahaka azy.
Hizara Hizara ‘Ianao Ihany no Tsy Mivadika’